Hypernet: kitiho ny fahefa-miasa momba ny fanaparitahana latsa-danja na mivarotra ny anao | Martech Zone
Zoma, Aogositra 17, 2018 Alarobia 15, 2018 Douglas Karr
Ny teknolojia Blockchain dia mbola ao amin'ny fahazazany, saingy mahavariana ny mahita ny fanavaozana izay mitranga manodidina azy izao. Hypernet dia iray amin'ireo ohatra ireo, manitatra mandeha ho azy ny herin'ny computing amin'ny fitaovana misy rehetra eto amin'ny Internet. Mieritreritra ireo CPU an-jatony tapitrisa izay mipetraka tsy miasa mandritra ny ora maro ianao indraindray - mbola mampiasa hery ihany, mbola mitaky fikolokoloana, nefa mandany vola fotsiny.
Inona ny orinasa mizaka tena itsinjaram-pahefana (DAC)?
Orinasa itsinjaram-pahefana itsinjaram-pahefana (DAC), dia fikambanana iray izay arahin'ireo lalàna voahodidin'ny programa solosaina antsoina hoe fifanarahana marani-tsaina.
Ny fanavaozana voalohany an'i Hypernet dia tsy ny singa iraisan'izy ireo; io no maodely fandefasana DAC ivelan'ny rojo. Ity maodely ity dia ahafahana mihazakazaka manao kajy amin'ny tambajotranà fitaovana mavitrika sy voazara, amin'ny fomba tsy mitonona anarana sy mitahiry tsiambaratelo. Hypernet dia manambatra ireo fitaovana ary mampiasa azy ireo hamahana ny olan'ny tena izy.
Hypernet mandamina fitaovana sy asa amin'ny tamba-jotra amin'ny alàlan'ny mpandrindra blockchain. Izy io dia mifanaraka amin'ny filan'ny mpividy sy ny mpamatsy azy araka ny tokony ho izy, manome antoka fa vita tsara araka izay tratra ny asa, ary manampy amin'ny fitazonana ny filaminana sy ny fahamendrehana. Ny DAC dia mampiasa rafitra famantarana mba hahazoana antoka fa eo ny loharanon-karena ilaina amin'ny mpanjifany, ao anatin'izany:
Staking - Ny mpividy sy ny mpivarotra dia tsy maintsy miantehitra antoka mba hamita ny asa compute. HyperTokens no antoka. Ny mpivarotra iray dia miantoka ny antoka amin'ny alàlan'ny fitaovany ary ny mpividy dia mametraka ny fandoavany ao amin'ny fifanarahana marani-tsaina eo alohany. Ao amin'ny tambajotra misy mpilalao tsy fantatra, ny fiantohana dia mitondra fiadanan-tsaina ho an'ny mpividy sy ny mpivarotra compute.
laza - Mitombo ny lazan'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny maha-mpanome compute azo itokisana sy tompon'andraikitra azy ary mpividy compute, ary ity laza ity dia tafiditra ao amin'ny blockchain. Ny lazan'ny mpampiasa dia mampitombo ny fahafaha-mandray anjara amin'ny asa fanisana.
Sandam-bola - HyperTokens no vola transactional izay ahafahan'ny fividianana sy fivarotana compute amin'ny tambajotra.
Fitrandrahana harena an-kibon'ny tany - Afaka mitrandraka HyperTokens ny olona eo am-piandrasana asa compute, amin'ny alàlan'ny fividianana ao amin'ny lobby fotsiny. Mandrisika ny mpampiasa hiditra amin'ny tambajotra izany ary hampisy ny fitaovan'izy ireo. Mandritra ny lobby dia azon'ireo mpampiasa atao ny manohitra ireo fitaovana tsy miasa hafa mba hahitana raha tena eo amin'ny Internet tokoa izy ireo. Raha tsy mahomby amin'ny fanamby izy ireo dia angonin'ilay mpihaona azy ny antoka. Ny habetsaky ny mari-pamantarana azo alaina ho an'ny fitrandrahana dia mihena rehefa mandeha ny fotoana, ka ny fanaovana sonia fitaovana mialoha dia mahazo ny marika indrindra.
Governemanta / Fifidianana voafidy - Node mandray anjara amin'ny fanamby sy valiny ary voatosika hanampy amin'ny fitazonana ny kalitaon'ny tamba-jotra, ary hanaisotra ny mpisehatra ratsy. Ny teboka tsirairay dia mametaka teboka hafa amin'ny mekanika fanamby / valiny hamaritana raha toa ka tena misy izy ireo rehefa miteny izy ireo. Ny fanovana lehibe eo amin'ny tamba-jotra dia azo alefa, miaraka amin'ny lanjanao amin'ny habetsaky ny HyperTokens hazoninao.
Hypernet dia namorona supercomputer lehibe indrindra manerantany amin'ny alàlan'ny fampiasana ny herin'ny computational of latent fitaovana. Amin'ny teny laika, midika izany isaky ny tsy ampiasaina ny gadget toy ny solosaina finday, finday avo lenta ary takelaka, Hypernet dia afaka mampiasa izany hery izany, ka tsy hianjera ireo tranonkala noho ny fihoaran'ny server. Inona koa, satria nozaraina sy notsinjaram-pahefana ity fahefana ity, tsy dia kely akory ny fahafaha-mitaky ny angon-drakitra manokana, manokana mandritra ny fifanakalozana eCommerce.
Tags: DACOrinasa mizaka tena itsinjaram-pahefanainformatika itsinjaram-pahefanahypernet